Canada High Commissioner kuJamaica Anoshanya negurukota rezveKushanya
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Jamaica Kupwanya Nhau » Canada High Commissioner kuJamaica Anoshanya negurukota rezveKushanya
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Caribbean • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Jamaica Kupwanya Nhau • nhau • ushanyi • Kufamba Wire Nhau
Kutendeseka kufona muJamaica
Gurukota rezvekushanyirwa kwenyika reJamaica, Hon. Edmund Bartlett, anoonekwa kurudyi pamufananidzo, anobatana neCanadian High Commissioner kuJamaica, Her Excellency Emina Tudakovic (pakati) uye Munyori Mukuru muBazi rezvekushanya, Jennifer Griffith, pavakambomira vachitarisa lenses munguva pfupi yapfuura. kufonerwa naMumiriri Mukuru kumahofisi eBazi iri kuNew Kingston.
Patafura yekukurukurirana yaive nzira idzo Jamaica neCanada vanogona kuramba vachishandira pamwe munzvimbo dzakaita sekushanya.
Chikamu chekushanya chinopa injini yekukura kwehupfumi hweJamaican.
Kudyidzana kwakazvipira pakati pevoruzhinji nevezvikamu zvakazvimirira kunodiwa kuzadzisa zvinangwa, pakati pezvirongwa zveHurumende Yezvekushanya.
Vakaita hurukuro yakadzama nezve shanduko muindasitiri yekufambisa zvichitevera denda reCCIDID-19, pamwe nenzira idzo Jamaica neCanada dzinogona kuramba dzichibatana munzvimbo dzakaita sekushanya.
The Jamaica Ministry of Tourism uye vamiriri vayo vari pachinangwa chekusimudzira nekushandura chigadzirwa chekushanya cheJamaica, nepo ichivimbisa kuti mabhenefiti ayo anoyerera kubva munharaunda yekushanya akawedzerwa kune vese maJamaica. Kusvika pari zvino yakaisa marongero nemaitiro anozopa kumwe kukura kwevashanyi seinjini yekukura kwe hupfumi hweJamaican. Bazi rinoramba rakazvipira kuona kuti chikamu chezvekushanya chinoita mupiro wakazara unobudirira mukusimudzira hupfumi hweJamaica zvichipiwa mukana wakakura wekuwana.
KuMinistry, vari kutungamira basa rekusimbisa hukama pakati pekushanya nedzimwe nzvimbo dzakadai sekurima, kugadzira, uye varaidzo, uye mukuita izvi kurudzira muJamaican wese kuti atore chikamu chavo mukuvandudza chigadzirwa chenyika yekushanyirwa, kuchengetedza mari, nekuvandudza mazuva ano uye kusiyanisa chikamu kusimudzira kukura uye kugadzira mabasa kune vamwe maJamaica. Bazi rinoona izvi zvichikosha pakupona kweJamaica uye kubudirira uye yaita izvi kuburikidza nenzira inosanganisirwa, inotungamirwa neVatambi Boards, kuburikidza nekubvunzana kwakakura.
Kuziva kuti mushandirapamwe pamwe nekudyidzana kwakazvipira pakati pevoruzhinji nevezvikamu zvakazvimirira zvichadikanwa kuzadzisa tarisiro, pakati pezvirongwa zveHurumende kuchengetedza nekuchengetedza hukama hwayo nevose vane chekuita nazvo. Mukudaro, zvinofungidzirwa kuti neChirongwa cheTenzi cheSustainable Tourism Development semutungamiri uye chirongwa cheNational Development Plan - Vision 2030 sechiyero - zvinangwa zveBazi zvinokwanisika kubatsira maJamaican ese.